Burburka af somaliga soo gadhay yaa u sabab ah? | Saxil News Network
Burburka af somaliga soo gadhay yaa u sabab ah?
In ka badan lix kun oo af ayaa la tilmaamaa in adduunka lagaga hadlo. Marka la eego daraasad ka soo baxday dhowaan hay’adda UNESCO waxa la qiyaasayaa in marka laba loo qaybiyo ay meel ahaan afafkaasi khatar ugu sugan yihiin in caad fuulo oo ay qarsoomaan ama ba ay dabargo’aan, dhintaan inta ka horraysa qarnigan 21-aad inta aanu dhammaan. Afsoomaaliga waxa lagu tirayaa afafkaas halista ugu jira in ay dhintaan.
Dad badan ayaa la yaaba marka laga tibaax bixiyo in afka Soomaaligu khatar ugu jiro inuu dabargo’o! Sidee af u dhintaa ummaddii ku hadlaysey oo nool, ayaa muranka intiisa badani ka oogmaa. Waxa dabargo’a oo dunida laga waayaa qaar ka mid ah dhirta, ugaadha, shimbiraha iwm. Afafka habaasku fuulo ee dayacmaa sidaas oo kale ayay dunida uga suulaan..
AHUN gaarriye oo dareenkiisa ku cabirayaa gabay ugu kaga hadalyo sidu afu uu dhintay
-Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye) – AHUN.
Ma qorrayn afku oo waxa uu ku koobnaa erey-afeed keliya. Dadka ku hadlaa waxa ay ku jireen hayaan iyo guurguur joogto ah. Xoolo dhaqato ayaa la ahaa. Dhaqammo, diimo iyo afaf kale ayaa dibedda kaga imanayey, haddana jiritaankiisu wuu xidhiidhsanaa. Wuu ka soo doogay aafooyinkaas iyo geeddigaas dheer ee hirrigta iyo haydaarada badnaa (xigasho buuga baadisooc ee uu qoray Mohamed Bashe X Xasan )
Umad waliba waxay ku fanta afka ay leedahay ee ay ku hadasho iskuna af garato Waxan isir iyo abb uu laha oo an awoowgay ka soo gadhay af an anigu leeyahay Waxanku barbaray af an anigu leeyahay oo an ku soo radqaday kuna soo hadaqay Markii an yaraa markan aduunka imid waxan la ii bilabay cashar an ku barto af anigu Leeyahay alla ha dayayee hooyo waxay ahay macalinka qudhe ee afka anigu leeyahay I bari jirtay waxay hadh iyo habeen ku hawl nayad sidii ay aniga afka iyo dhaqanka aynu leenahay Ii bari lahayd waxay tacab badan galisay sidan u baran laha afkayga hoo
yo uguna hadli lahaa Hadana hooyoyinka soo galay halgan iyo tacaab dheer sidii ay afka hooyo ugu bari lahayeen caruurtooda Waxa dacabkoodii ay mudo dheer so wadeen ila imikan wadan waxa laga dhigay waxab kama jiran.Hadab su,aash is waydinta leh waxa weeyi Burburka af somaliga soo gadhay yaa u sabab ah ? Waxan amin sanahay inay xilkii ka sarnaa dawadu ay gabeen isla markan ka soo biix wayeen wajibadki ka sarnaa afka hooyo dawaladan sabab uu ah burburka af somaliga soo gadhaya af somaliga waayo iyada masuul ka sidu dhigay qodobka 6aad ee dastuurka jamuuriyada Somaliland waxa afka ilaalintiisa uga masuul ah ALLA SCW ka sakow jamuuriyada Somaliland oo ilahay masuuliyad ugu dhigay umada ku abtirsataa af somaliga.
Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland waa AF-Soomaaliga, Afka labaadna waa AfCarabiga.
Afafka kale waxa loo adeegsan karaa wixii looga maarmi waayo
Hadab isaga oo afku sida mihim uu ah dastuurkan aynu ku qoran waxaynu mar walba jabinaa dastuurka jamuriyada Somaliland waliba kolba cida masuul ka ah afka hooyo ba ila wadaaga ama ila eega boos ay wasarada arimaha gudaha soo xayaysisay waxay shurud uga dhigay inu qofku si faseex ah uu yaqaano ama uga hadli karo ingilishka hadaba waxa is waydin leh Wadankan ma England oo yar ba? mise waa qayb ka mid ah united kingdom? manay jirin dawalad Somali ah oo leh af uu gar ah oo lagu garto oo ay ka duwan tahay wadamad kale mise waxay rabta inay noqoto UK illhay ayaa inagu abuuray carrada la yidhado dhulka somalida man noqon karno UK IWM .
Maxad meel kale ka sheeg ee ay ka mid yihin NGO hayAdaha UN IWM waxad arkaysaa lamahii dawalad oo si burburinya afki hooyo dhir galinya af anay lahayn kuan xidhaya qofka shaqo doona ah inu afka qala d xoog uu yaqaano waa ayan darro ku dhacaday afkeen hooyo su,ashayda waxan uu daynayaa akhristayaasha sharafta leh ee meelkastaydunida ka joogan ee ku abtirsata af hooyo ee somaliga .
By Garyaqan gouleid Ibrahim Hassan
University of Hargeisa faculty of law